कोरोनाभाइरसविरुद्ध बन्ने खोप धनी देशले थुपार्ने सम्भावना कति ? - Dainik Online Dainik Online
कोरोनाभाइरसविरुद्ध बन्ने खोप धनी देशले थुपार्ने सम्भावना कति ?
प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०७६, बुधबार १ : २२
मलेक्युलर जेनेटिसिस्ट केट ब्रोडेरिक विश्वभरि कोभिड-१९ विरुद्धको खोप विकासको प्रयास गरिरहेका ४४ वटा परियोजनासँग सम्बद्ध वैज्ञानिकहरूको समूहमा संलग्न छिन्। उनी डिसेम्बरको सुरुमा १० लाख खोप तयार गर्ने योजना बनाएको अमेरिकास्थित जैविक प्रविधि कम्पनी इनिभिओका अनुसन्धानकर्ताको एउटा समूहको सदस्य हुन्।
उनले भनिन्, "मेरी बहिनी दिनहुँ रोगसँग लडिरहेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न सङ्घर्ष गर्दैछिन्। त्यसैले म खोपको आपूर्तिबारे चिन्तित छु। खोप तयार गर्नुपर्ने खाँचो छ।"
तर अहिले नै इनोभिओका उत्पादन धनी देशले कब्जा गर्ने अवस्था भएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 'इम्युनाईजेशन ग्याप' अर्थात् खोपको उपलब्धतामा हुने विभेदको जोखिमबारे सरुवारोग नियन्त्रणविज्ञ सेथ बर्क्लीले आवाज उठाएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन उक्त संस्थाको सदस्य छ। बर्कलेले भने, "अहिलेसम्म खोप उपलब्ध नभए पनि हामीले त्यसबारे अब छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।" उनका भनाइमा धनी देशमा जसलाई चाहिन्छ उसका निम्ति र गरिब देशमा जसलाई खाँचो छ उसको निम्ति पनि खोप प्रशस्त रहेको सुनिश्चित गर्ने चुनौती हुनेछ।उनको आशङ्का निराधार छैन।
यसअघिका खोपमा सन्दर्भमा पनि असमान पहुँच एउटा विशेषता बन्यो। केही समयअघि जर्मन समाचारपत्र 'भेल्ट आम जोन्टाग'ले उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जर्मन कम्पनी क्योरभ्याकले विकास गर्न लागेको खोपमा अमेरिकीहरूको विशेष पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको तर विफल भएको उल्लेख गरेको छ।
हेपाटाइटिस 'बी'मा विभेद
हेपाटाइटिस 'बी' को खोप एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कलेजोको क्यान्सरको कारक बन्ने उक्त भाइरसको सङ्क्रमण एचआईभीभन्दा पनि ५० गुना बढी छ। सन् २०१५ मा विश्वभरि २५ करोड ७० लाख मानिसमा हेपाटाइटिस बीको सङ्क्रमण रहेको अनुमान गरिएको छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कोअलिशन फोर एपिडेमिक प्रिपेअर्ड्नस इनोभेशन्स (सीईपीआई) हो। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग खोपको विकासमा लगानी गर्न त्यो संस्था सन् २०१७ मा नर्वेमा स्थापना गरिएको हो। उसले खोप वितरणका लागि खुला वकालत गर्छ।
दुई तहको पहुँच
दोष कसको हो त? उच्च मागका कारण विश्वव्यापी अभाव। जबकि पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारण विश्वभरि हुने कुल मृत्युको ८५ प्रतिशत विकासशील देशमा हुन्छ। यस्तो अभाव किन हुन्छ भन्ने बुझ्न हामीले खोपको व्यापारबारे बुझ्नुपर्छ।
सानो तर लोभलाग्दो अंश
औषधि उद्योगका लागि खोप आयको आधारभूत उत्पादन हैन। विश्व बजारमा उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१८ मा औषधिको बजार १२ खर्ब डलरको रह्यो जबकि खोपको बजार ४० अर्ब डलरमा सीमित थियो।
यस्तो असमानताले उपचारको औषधिभन्दा खोप विकास गर्ने व्यापार कति जोखिममा छ भन्ने देखाउँछ। खोपको अनुसन्धान र विकास मूल्य निकै उच्च हुन्छ। अनि परीक्षणसम्बन्धी नियमहरू पनि धेरै जटिल छन्।
त्यसका अतिरिक्त मुख्य ग्राहक सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू निजी ग्राहकभन्दा निकै कममा खरिद गर्छन्। तसर्थ मानिसले जीवनमा एक चोटि मात्रै लाउने खोपहरू अन्य औषधिको तुलनामा कम नाफामूलक हुन्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा खोप उत्पादक उद्योगको सङ्ख्या घटेको छ।
उद्योगहरू रोकथामभन्दा पनि उपचारमा धेरै केन्द्रित हुन थालेपछि सन् १९६७ मा २६ वटा रहेको खोप उत्पादक उद्योगको सङ्ख्या सन् २००४ मा पाँच वटामा सीमित भएको छ। तैपनि अवस्थामा परिवर्तन आएको छ।
स्वतन्त्र बजारको चिन्ता
कम्तीमा खोपको विकास तथा अनुसन्धानको लागत उठाउन धनी बजारमा धेरै नै आकर्षक नाफा हुन्छ। ब्रिटेनको औषधि उत्पादकको सङ्घले नयाँ खोप उत्पादन खर्च १.८ अर्ब डलर लाग्ने अनुमान गरेको छ।
लन्डन स्कूल अफ हाईजीन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका प्राध्यापक मार्क जिटले बीबीसीसँग भने, "यदि हामीले निर्णय गर्न स्वतन्त्र बजारलाई छाडिदियौँ भने कोभिड-१९ को खोपमा धनी देशका मानिसहरूको पहुँच मात्र हुनेछ।" विगतमा कैयौँ खोपका सन्दर्भमा त्यस्तो उदाहरण देखिएको बताउँदै उनले त्यो फेरि दोहोरिएमा ठूलो पीडा बेहोर्नुपर्ने बताए।
उदाहरणका निम्ति इनोभिओले कोभिड-१९ विरुद्ध बनाउन लागेको खोप सफल भएमा उसले करोडौँ थान खोप उत्पादन गर्न कुनै औषधि उद्योगसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला कम्पनीहरूले सार्वजनिक रूपमा खोपमा विश्वव्यापी पहुँचको निम्ति काम गर्ने सङ्कल्प गरेका छन्।
ब्रिटेनस्थित विश्वकै ठूला औषधि उद्योगमध्येको एक ग्ल्याक्सोस्मिथक्लाइन (जीएसके) कोभिड-१९ को खोपको विकास गर्न विभिन्न साझेदारहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। एउटा विज्ञप्तिमा जीएसकेकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एमा वाल्म्सलीले भनेकी छन्, "कोभिड-१९ लाई परास्त गर्न स्वास्थ्य सुरक्षामा काम गर्ने प्रत्येकबाट संयुक्त प्रयासको खाँचो छ।"
ग्याभीका सेथ बर्क्ली 'खोप सेवा प्रदानमा रहेको विभेद' मेट्न त्यस्तो सहमतिको ठूलो योगदान हुने धारणा राख्छन्। "पक्कै पनि विश्वव्यापी पहुँच तत्काल सार्थक हुनेछैन," उनी भन्छन्, "तर पैसा तिर्न सक्ने क्षमताकै आधारमा मात्र मानिसहरूले खोप पाउने अवस्था हुन सक्दैन।" उनका भनाइमा यदि निकै खाँचो रहेको स्थानलाई प्राथमिकता दिइएन भने महामारी जारी रहनेछ।